Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland ayaa casho sharaf ku maamuustay madaxda haayadda AFAD isla markaana gudoonsiiyay shahaado sharaf. Safarka masuuliyiinta aya daba socday kadib socdaal shaqo oo ay wasiirku ku tagtay dalka Turkey. – MESAF
News & Events News Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland ayaa casho sharaf ku maamuustay madaxda haayadda AFAD isla markaana gudoonsiiyay shahaado sharaf. Safarka masuuliyiinta aya daba socday kadib socdaal shaqo oo ay wasiirku ku tagtay dalka Turkey.
Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland ayaa casho sharaf ku maamuustay madaxda haayadda AFAD isla markaana gudoonsiiyay shahaado sharaf. Safarka masuuliyiinta aya daba socday kadib socdaal shaqo oo ay wasiirku ku tagtay dalka Turkey.
Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland ayaa habeenimadii xalay magaaladda hargaysa ugu samaysay casho sharaf masuuliyiinta haayadda AFAD ee fadhigoodu yahay dalka Turkey.
Wasiirka wasaaradda iyo masuuliyiinta haayadda aya kawada hadlay dardar gelinta hawlaha mucaawino ee ay ka wadaan dalka.
Safarka masuuliyiinta aya daba socday kadib socdaal ay wasiirka wasaaraddu ku tagtay dalka Turkey bishii laso dhaafay.
Masuuliyiinta haayadda aya balan qaaday dhankooda inay xoojinayaan wada shaqaynta u bilaabantay wasaaradda iyo haayadda AFAD.
Ugu danbayna wasiirka wasaaradda ayaa uga mahad naqday sida wanaagsan ee ay uga hawl galeen Arrimaha Bulshada.
Agaasimaha Guud Ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshadda Iyo Qoyska Soomaliland Mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan Ayaa manta shir gudoomiyay shirka bilaha ah Ee ay wada qaataan haayaddaha ay wasaaradda wada shaqeeyaan waxaana lagaga dooda waxyaabihii la qabtay bishii lasoo dhaafay iyo qoryashaasa bilaha soo socda.